Recap Monthly: Mee na Casino Oke - pisklak.net
Recap Monthly: Mee na Casino Oke
Anyị ọhụrụ kwa ọnwa akụkọ na-jurun’ọnụ na-ukwuu bonuses, nnukwu enweta nkwanye, ozugbo Upgrades, ọhụrụ egwuregwu, wdg Ọzọkwa, si May nwere ohere na-enwe a pụrụ iche oghere rotation ndorondoro na-enweta oké nwa anụmanụ. Soro anyi rue ntule onwa Mee na crypto cha cha Oke ichota ihe omuma ihe omuma nke onwa.
Spinner Winner ndorondoro
Ọ bụrụ na ị na-egwuri egwu na nwanne anyị nwanyị cha cha Brango mgbe ahụ ị maara banyere oghere Heist. Ugbu a, anyị na-enye gị otu ihe ahụ na crypto cha cha Oke aha un Spinner Winner Chicken Dinner. Iwu dị mfe ma nwee ohere iji merie buru ibu.
Nke mbu, igaghi agha iji nara ihe nrite. Naanị igwu egwu nwere ike ime gị Onye mmeri Twist na-achịkọta ihe nrite kwa izu. Ya bụ, Tuesday ọ bụla anyị ga-ebido Spinner Winner Tournament na-enye gị ohere ịbanye gburugburu nke ndị mmeri. Ga-atụrịrị, ị ga-agbagharị. Nanị, ka ị na-egwuri egwu, ọ ga-eme ka ị nwee ohere iji nweta ihe nrite.
Ndị mmadụ maka RTG juru anyị anya na egwuregwu ọhụrụ abụọ na Mee. Na mbido ọnwa, ha malitere oghere Wild Fire 7s, egwuregwu dị oke mma mana enwere usoro ụlọ akwụkwọ ochie banyere etu o si adị. E only ihe niile gbasara oghere an’ụzọ iji chetara ndị egwuregwu ebe egwuregwu egwuregwu si. N’elu ya, ị nwere ike ịhụ ụfọdụ akara ngosi mara mma na nke a pụrụ ịmata amara, dị ka asaa, cherị, Ogwe. Nke a bụ egwuregwu dị mfe igwu egwu, mana nke a apụtaghị na ọ bụrụ na ị na-egwu ezigbo self explanatory, ị ga-agwụ ike. N’ebe ya. The egwuregwu nwere ụfọdụ pụrụ iche daashi agba nwere ike inyere gị aka imeri nnukwu.
Ọzọ May tọhapụ bụ Shopping Spree II oghere, ezigbo ụlọ ahịa paradise. Ihe ịzụ ahịa niile dị ebe a ma kpuchie ya. Ihe mgbaaka Diamond, akara buck, akpa aka, ugogbe anya maka anwụ, ugba olu, kaadị akwụmụgwọ, ekwentị mkpanaaka bụ ụfọdụ akara, mana dịka na ndụn’ezie”SALE” bụ otun’ime ihe kachasị mma. Ọ bụ anụ ọhịa na oghere ntanetị a miniature gosipụta na agbaji na 3 na ndị ọzọ maka akara ndị ọzọ niile belụsọ ikposa nke bụ akara egwuregwu ahụ.
Ewezuga ihe ọchị na ị nweta mmeri, otu isi ihe dị d e cha cha cha cha na-enwe ike iwepụ mmeri gịn’otu ntabi anya. Casino Extreme group bụ nke ndị eze na-ewepụ ngwa ngwa bụ ndị raara nye afọ ojuju gị.
Mee nke a t Casino Oke, anyị haziri ọtụtụ nkwụghachi. Nke kachasị bụ $ 15,500 maka onye ọkpụkpọ ama ama ama. Ọzọkwa, a na-akwụghachi ọtụtụ nkwụghachi nke $8000 t $6000.
Oghere ndagwurugwu na May
Dị ka ọnwa ọ bụla, ọtụtụ egwuregwu gbara asọmpi kwa izu na ngwụsị izu. Na Mee ihe karịrị 1300 n’ime ha sonyere na ụfọdụ, mana ọtụtụ egwuru egwu bụ Extreme Weekly na Mee 24th. Egwuregwu kachasị ewu ewu bụ oghere Loose Caboose.
Egwuregwu iji Payaa ntị
N’ọnwa gara aga, anyị hụrụ ọtụtụ nnukwu mmeri na ndọrọ self love ozigbo. Egwuregwu ndị ahụ nyere nnukwu self love ịkwụ ụgwọ bụ oghere ise: Nova 7s, Gods of Nature, Vegas Lux, Gods oge ochie na King of Swing.
N’akụkụ nke ọzọ, egwuregwu kachasị egwuri egwu na Mee t crypto casino Oke bụ: Akụ bara ụba, Money Bandits 3, Halloween Treasure, Gemtopia, na Keno.
Na nyochaghachi nke ọnwa a, naanị anyị chọrọ ịgbakwunye d e nzọ ahụ dị mma cha cha Oke malitere ịnara mkpụrụ self Binance, kamakwa ị attentiona ntị na Litecoin,n’ihi na anyị nwere onyinye pụrụ iche maka gị na June.